Umgodi kusendlalelo se-ozone uzinza okokuqala | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imbobo kusendlalelo lwe-ozone iyazinza okokuqala
Imbobo kusendlalelo lwe-ozone yaziwa cishe emhlabeni wonke. Amagesi abamba ukushisa abizwa ngokuthi ama-chlorofluorocarbons (CFCs) anciphise ukugxila kwe-ozone endaweni yase-Antarctic. Ngo-1992 yasungulwa Isivumelwano saseMontreal lapho ukukhishwa kwalezi gesi kungavunyelwe.
Kuze kube manje, umgodi osendleleni ye-ozone umisiwe okokuqala emhlabeni wonke futhi ukhombisa nezimpawu zokululama, ngenxa yalokhu kuqedwa kokukhishwa kwala magesi okuyiqothulayo. Unjani umbono we-ozone ku-stratosphere yethu?
1 Ukwehliswa komgodi we-ozone
2 Imiphumela yokufudumala komhlaba
Ukwehliswa komgodi we-ozone
Le datha imele impumelelo ephelele uma kukhulunywa ngokubheka isimo songqimba lwe-ozone emhlabeni jikelele. Siyabonga eduze 99% wezinto eziqeda i-ozone ziyekile ukukhishwa emkhathini, umgodi osendleleni ye-ozone uyalulama. Ukube lokhu bekungenzekanga - kuqhubekile - ukwanda kwemisebe ye-ultraviolet, okubangelwe ukubhujiswa kongqimba lwe-ozone, bekungeke kungahambisani nempilo.
Noma lokhu kuyizindaba ezinhle, kusengaphephile ukudedela unogada wakho futhi uqhubeke nokusebenza kumamodeli asemkhathini asiza ngokuzinza kongqimba lwe-ozone.
Imiphumela yokufudumala komhlaba
Ukushisa kakhulu komhlaba kukhiqize ukwanda kwezinga lokushisa ebusweni beplanethi (troposphere), kepha futhi kuholele ekupholiseni ezingxenyeni ezingaphezulu zomkhathi (stratosphere), okuhumushela ekusheshiseni okunamandla kakhulu komoya oshisayo wamanje osuka enkabazwe uya ezigxotsheni.
Ngenxa yokwanda kwalokhu kugeleza komoya, kufakwa i-oxygen eningi ezingxenyeni ezingenhla zomkhathi, ekugcineni eziguqulwa zibe yi-ozone. Ngakho-ke ukukhiqizwa kwe-ozone kuphakeme. Ngakho-ke, ukuvela kongqimba lwe-ozone kuzoya ngamandla wesimo sezulu lapho sinciphisa ukufudumala kwembulunga yonke neSivumelwano SaseParis.
Isimo sezulu sesimo sezulu maphakathi naleli khulu leminyaka "ukuncipha" kwesendlalelo ezindaweni ezisenkabazwe kanye nokuqina kunangaphambili phambilini kwezindawo eziphakathi nendawo eziphakeme, ezizothinta ngokuphelele izwekazi laseYurophu, ngezigameko ezikhethekile emazweni aseNordic.
Njengoba amagesi abamba ukushisa enza ushintsho kumakhemikhali e-ozone, kufanele kuvinjelwe ukukhishwa kwama-hydrofluorocarbons (HFCs) eziqandisini nakuma-air conditioner.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Imbobo kusendlalelo lwe-ozone iyazinza okokuqala
IYurophu ithola ifu elinemisebe yeRuthenium 106